29 iindlela ngaphezu ekujoliswe ukuthengiswa - China Shandong Zhongbaokang Medical
Ukuze kuphuculwe ngakumbi ulwazi lorhwebo kunye nokukwazi yentengiso intengiso yenkampani, ngokwesicwangciso uqeqesho yonyaka yenkampani ye-2017, ngo-Aprili 14-16, Taibao Group walungelelanisa "29 iindlela ngaphezu ekujoliswe intengiso" Xa iqeqesha -house, i utitshala uqeqesho Wang Tian ababenza kuqeqesho yobugcisa iminyaka esibhozo, kunye inala eziqinileyo amava sentengiso practice uqeqesho.
Uqeqesho lwenziwa kwiinxalenye ezintlanu xa iyonke. Inxalenye 1: Strategies ngokuba Beyond Sales Iithagethi; Icandelo 2: Uphuhliso Customer New; Inxalenye 3: Self-wokuvavanya ulwazi lomfundi imigodi; Isigaba 4: Product isebenze; Isigaba 5: Post President
Ngexesha loqeqesho ukuba ithathe inxaxheba ngoomoya eziphakamileyo lufundwa imizekelo ukuqaliswa koqeqesho. Olu qeqesho ke guquka, kujoliswe inxaxheba ngokupheleleyo kwaye echaza ukubaluleka ukuzithengisa izimvo kunye nobuchule zokumaketha ezivela kwiinkalo ezahlukeneyo, wachaza indlela abe ngumntu esihle zentengiso. abasebenzi Marketing kwi lokuqeqeshwa iimvakalelo ezinzulu wavakalisa sengqondo esihle kwaye uxanduva kumsebenzi elizayo, yaye ekugqibeleni iphumelele iziphumo zoqeqesho elungileyo.